Iindaba kunye nezinto ezintsha kwiinkcukacha zeeNdawo zeeNdawo
Kwiphepha lesi-6 leTwingeo Magazine, besinethuba lokudlan 'indlebe no-Elise Van Tilborg, uMseki-mbumba we-IMARA. Ukuqalisa kwesiDatshi kutshanje kuphumelele uMceli mngeni wePlanethi eCopernicus Masters 2020 kwaye uzibophelele kwilizwe elizinzileyo ngokusetyenziswa kwendalo. Isilogeni sabo sithi "Jonga ngempembelelo yakho kwindalo esingqongileyo", kwaye benza ...
cadastre irobhothi I-Geomatics GIS
Iiphotography, cadastre, Geospatial - GIS
Kolu hlelo lwe-6 lweTwingeo Magazine sivula icandelo elinikezelwe kushishino, ngeli xesha yayilixesha likaJavier Gabás Jiménez, athe uGeofumadas wanxibelelana naye ngamanye amaxesha ngeenkonzo kunye namathuba anikezelwa kuluntu lwe-GEO. Enkosi ngenkxaso kunye nokuqhutywa koluntu lwe-GEO, sikwazile ukwenza isicwangciso sethu ...
Iiphotography, Ukufundisa i-CAD / GIS, Geospatial - GIS
Njengoko ilizwe lilungiselela ukusinda kwihlabathi lasemva kwe-COVID, uMagnasoft, inkokeli kulwazi lwedijithali kunye neenkonzo ezinobukho e-India, e-UK nase-US, zisizisela iindaba ezikhuthazayo. Womeleze iqela lakhe lobunkokeli ngeBhodi yabaLawuli esandula ukusekwa, ebandakanya uBhupinder Singh,…
I-National States Geographic Information Council (i-NSGIC) yazisa ngokuqeshwa kwamalungu amahlanu kwiBhodi yaBalawuli, kunye noluhlu olupheleleyo lwamagosa kunye namalungu eBhodi kwixesha le-2020-2021. UFrank Winters (NY) uqala njengomongameli onyulelwe ukuba ngumongameli we-NSGIC, ethatha izintso kuKaren ...
U-Esri, inkokheli yehlabathi kubukrelekrele bendawo, ubhengeze namhlanje ukuba utyikitye isivumelwano semvumelwano (MOU) kunye ne-UN-Habitat. Ngaphantsi kwesivumelwano, i-UN-Habitat iza kusebenzisa isoftware yakwa-Esri ukuphuhlisa isiseko setekhnoloji ye-geospatial technology ukunceda ukwakha ukubandakanya, ukukhusela, ukomelela nokuzinzileyo kwezixeko kunye noluntu kwihlabathi liphela kwiindawo ...
Yintoni onokuyilindela kwi-Master kwiiGeometri zoMthetho. Kuyo yonke imbali kuye kwagqitywa ukuba i-cadastre yearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba sesona sixhobo sisebenzayo kulawulo lomhlaba, enkosi koku, amawaka eedatha yendawo kunye neyomzimba enxulunyaniswa nomhlaba ifunyenwe. Kwelinye icala, sibonile ukuba kutsha nje ...
Iiphotography, cadastre, Ukufundisa i-CAD / GIS, Geospatial - GIS
INDLELA YOKUJONGA I-GEOSPATIAL Kule nyanga sinika iTwingeo Magazine kuHlelo lwayo lwesi-5, siqhubeka nomxholo ophambili we "The Geospatial Perspective" yangaphambili, kwaye oko kukuthi kuninzi lwelaphu ekufuneka lisikiwe malunga nekamva lobuchwephesha be-geospatial kunye nekhonkco phakathi kwezi kwenye amashishini abalulekileyo. Siyaqhubeka nokubuza imibuzo ekhokelela ...
UGeofumadas uqhakamshelane noWang Haitao, uSekela Mongameli weSuperMap International, ukuze azibonele ngokwakhe zonke izisombululo kwibala le-geospatial, elinikezelwa yiSuperMap Software Co, Ltd. 1. Nceda usixelele ngohambo lweSuperMap lokuzivelela njengomboneleli ophambili ovela kumboneleli we-China GIS iSuperMap Software Co., Ltd. ngumboneleli omtsha we ...
Geospatial - GIS, ezintsha, SuperGIS
URhulumente waseScotland kunye neKhomishini yeGeospatial bavumile ukuba ukusukela nge-19 Meyi 2020 iScotland izakuba yinxalenye yesiVumelwano seCandelo loLuntu seGeospatial. Esi sivumelwano sikazwelonke siza kuthatha indawo yesiVumelwano seMephu saseScotland (OSMA) kunye neGreenspace Scotland. Abasebenzisi bakarhulumente waseScotland, ...
Kutshanje sithethe noJavier Gabás Jiménez, iinjineli zeGeomatics kunye neTografi, uMagister eGeodesy naseCartography - iPytechnic University yaseMadrid, kunye nomnye wabameli beGeopois.com. Sifuna ukufumana kuqala lonke ulwazi malunga neGeopois, eyaqala ukwaziwa ukusukela nge2018. Saqala ngombuzo olula, Yintoni iGeopois.com?
cartography Geospatial I-Geomatics Ukwenza iphepha lewebhu
Geospatial - GIS, ezintsha
APHA Iitekhnoloji, indawo yedatha kunye neqonga lobuchwephesha, kunye neLoqate, umphuhlisi ophambili wokuqinisekisa iidilesi zehlabathi kunye nezisombululo ze-geocoding, babhengeze ubuhlakani obandisiweyo ukubonelela amashishini ngokutsha kokubanjwa kwedilesi, ukuqinisekiswa kunye netekhnoloji ye-geocoding. Amashishini kuwo onke amashishini afuna idatha yedilesi ...
(LR) uLieutenant General Girish Kumar, uSurveyor Jikelele wase-India, u-Usha Thorat, uSihlalo weBhodi yeRhuluneli, i-FES kunye nowayesakuba nguSekela-Rhuluneli we-Reserve Bank yase-India, u-Dorine Burmanje, uSihlalo-we-Co, Ulawulo loLwazi lweGlobal Geospatial. IZizwe eziManyeneyo (i-UN-GGIM) kunye noJagdeesh Rao, i-CEO, i-FES, ngexesha lokumiliselwa kwe-Observatory ...
Page 1 Page 2 Page 3 ... Page 19 kwiphepha elilandelayo